IP Ọkụ: Jiri Ihe Mgbakwunye IP a Mee Mmetụta Ọhụrụ Gị | Martech Zone
Ọ bụrụ n ’ị nwetala nnukwu aha ndebanye aha gị wee kwaga na onye na-eweta ọrụ email ọhụrụ (ESP), ikekwe ị gaferela ụfụ nke ịbịaru aha ọhụrụ gị. Ma ọ bụ nke ka njọ… ị kwadebereghị maka ya ma ozugbo ị hụrụ onwe gị na nsogbu na otu n'ime nsogbu ole na ole:
Onye na-enye ọrụ Email ọhụrụ gị nwetara mkpesa ma gbochie gị ozugbo izipu ozi email ọzọ ruo mgbe ị kpebiri nsogbu a.
Onye na-ahụ maka ọrụ Internetntanetị ma ọ bụ ọrụ nlekota aha anaghị amata adreesị IP gị ma gbochie nnukwu mkpọsa gị.
Onye na-ahụ maka Ọrụ Internetntanetị enweghị aha maka adreesị IP ọhụrụ gị ma na-aga email gị niile na folda junk.
Na-amalite n'ụkwụ aka nri ya na IP Okpomoku atụmatụ dị oke mkpa mgbe ị na-akwaga na onye na-eweta ọrụ email ọhụrụ. Imirikiti ndị na-enye ọrụ Email anaghị eme nnukwu ihe banyere ya… ha na-echetara gị ka ị kpoo adreesị IP ọhụrụ gị. Maka nsonaazụ dị elu, n'agbanyeghị, ọ bụghị ọrụ dị mfe:
Chọghị itinye ihe egwu ọ bụla na izipu izizi gị, yabụ ịkekọrịta ndị debanyere aha gị na ndị debanyere aha gị dị oke egwu. Ọ bụrụ na mmadụ emeghere ma ọ bụ pịa email na ọnwa… eleghị anya ị chọghị inwe ha na mkpọsa Okpomoku IP gị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nchekwa data ọ bụla nwere adreesị ozi-e na spam ọnyà adreesị email nke ha ewepụbeghị ma ọ bụ kpochaa. Tupu izipu mgbasa ozi IP na-ekpo ọkụ, ịchọrọ ikpochapụ adreesị email ndị a na nchekwa data gị.
ISP ọ bụla nwere oke email adreesị kachasị mma iji bido iji wuo aha ha na oge. Iji maa atụ, Google chọrọ ka izipu obere ego na mbụ, wee bulie ego karịa oge. Dịka nsonaazụ, ịkwesịrị iji nlezianya kewaa ma dozie mkpọsa gị.
Mgbe emebe na-emepe emepe ihe ịga nke ọma IP Okpomoku atụmatụ maka ọtụtụ narị ndị ahịa, ndị mmekọ m na m Highbridge kpebiri ịmalite ọrụ nke anyị n'afọ gara aga iji mee ka usoro ahụ dị mfe. Akụkụ nke IP Ọmụ gụnyere:
Nchacha - Nhicha nke data ntinye aka iji belata bounces, adreesị ozi-e nwa oge, na ọnyà spam. Anyị na-ebelata ihe ndekọ ndị a na mkpọsa mepụtara ma weghachite data ahụ iji melite ndekọ ndekọ gị.
Ibute ụzọ - Anyị na-ebute ndị debanyere aha na-adabere na njikọ ha na ụlọ ọrụ iji hụ na ndị debanyere aha ha na-eme nke ọma bu ụzọ zigara mgbasa ozi IP Warming.
Ngalaba ọgụgụ isi - Imirikiti IP IP Warming na-agwa gị naanị ka ịlele email gị site na ISP; Otú ọ dị, nke ahụ adịghị mfe dị ka ilele ngalaba nke adreesị ozi-e. Anyị na-edozi ngalaba ahụ ma nwee ọgụgụ isi na ọrụ ha na-eji iji bulie mkpọsa ahụ. Nke a dị oke egwu na ụlọ ọrụ B2B bụ ndị na-ezipụ isi na ngalaba azụmaahịa na ọ bụghị ụdị ozi ịntanetị ndị ahịa.
Ịtọ oge - Anyị laghachi mkpọsa anatara na-atụ aro na izipu oge gị ka ị wee nwee ike mfe mbubata anatara na ịtọọ oge ndị eziga. Ihe ị ga - eme bụ ịmepụta mkpọsa na ịhazi oge eziga!
Na-akwaga Na Adreesị IP Ekekọrịta na New ESP gị?
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa email pere mpe nke na-agagharị na adreesị IP nkekọrịta na onye na-eweta ọrụ Email ọhụrụ, mkpocha na nkwadebe mkpọsa anyị na-eme maka gị ga-egbochi gị pụọ na nsogbu.
IP Igwe Ọdụ ọkụ
Anyị na-arụ ọrụ iji welie ikpo okwu ọbụna n'ihu na njikọta data yana ndokwa eziga site na API ka ụlọ ọrụ ga-eme obere. N'oge a, ọ kachasị ọrụ njedebe - mana anyị na-arụ ọrụ na njedebe na njedebe na nkwalite ndị a.
Ọ bụrụ na ị na-akwado maka ịkwaga na onye na-eweta ọrụ Email ọhụrụ, ugbu a bụ oge dị mma iji ikpo okwu ahụ ebe anyị na-akwado ndị ahịa ma na-enyere anyị aka!
Ina-amalite na IP Ọkụ
Ngosi: Abụ m onye mmekọ na IP Ọkụ.
Tags: raara onwe ya nye ipozi nnapụta emailaha emailonye na-enye ọrụ emailespaha ọma ipip ọkụip kpoo ngwaọrụ okpomoku ipnnweta ip